တရုတ်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို, အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်, အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Servo မော်တော်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို,မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်,မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး Servo မော်တော်,variable-ကြိမ်နှုန်း Servo မော်တော်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး Servo မော်တော် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါးသည် Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hofic အလိုအလျောက်တံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါး Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးသည် 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Servo မော်တော်အတူအလိုအလျောက်တံခါးထိန်းချုပ်ရေး Box ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Servo မော်တော်အတူ controller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါး Servo မော်တော်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်းတံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
220V 50Hz မြန် Shutter တံခါး SEJ မော်တော် / High Speed ​​အော်ပရေတာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သုံးအဆင့် AC အ induction motor / High Speed ​​ကြိတ်စက်တံခါးဂျာမဏီချုပ်မော်တော်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
220V 50Hz / 60Hz IP65 အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Servo System ကိုမော်တော်နှင့် Servo Controller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး 50HZ-60HZ Variable-အကြိမ်ရေ Servo မော်တော်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို 1. Precision: စနစ်အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း...
အလိုအလျောက်တံခါး Servo မော်တော် 1. Precision: စနစ်အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း overshooting တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ် 2.Stability:...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး 50HZ-60HZ Variable-အကြိမ်ရေ Servo မော်တော် 1. Precision: စနစ်အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး 50HZ-60HZ Variable-အကြိမ်ရေ Servo မော်တော် 1. Precision: အ systerm အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း...
220V 50Hz မြန် Shutter တံခါး SEJ မော်တော် / High Speed အော်ပရေတာ roller Shutter တံခါးမော်တော် Basic Info. Model NO.: HF--157 Function: Driving, Control Number of Stator: Single-Phase Rated...
220V 50Hz / 60Hz IP65 အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Servo System ကိုမော်တော်နှင့် Servo Controller (PE200B) အသစ်ကမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကို drive ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု servo စနစ်ကညွှန်ကြားချက်များ: စေ့စပ်သေချာခြင်း the systerm use full closed-loop servo...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး 50HZ-60HZ Variable-အကြိမ်ရေ Servo မော်တော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်: 1. Precision: အ systerm အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့,...
တရုတ်နိုင်ငံ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို ပေးသွင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဂျာမန်ချုပ်မော်တော်, ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီ Controller ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Hofic servo motor ကိုနှင့် controller ကို။ တရုတ်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ် SEJ မော်တာများနှင့် Holip controller ကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာမန်ချုပ်မော်တော်နဲ့ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီ Controller အကြောင်း: ဒါဟာချုပ်မှာသင့် application များအတွက်စံပြစွမ်းအင်ထိရောက်မော်တာကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါစီးရီးဟာတကမ္ဘာလုံးသက်ဆိုင်သောထိရောက်မှုအတန်း၎င်း၏အကွာအဝေးအတွင်းသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ ဒီမော်တာဒီဇိုင်းအတွင်းအာဏာနှင့်ကြိမ်နှုန်းကို Select လုပ်ပါနှင့်သင်ပြီးသားအရေးကြီးဆုံးရွေးချယ်ရေး၏စောင့်ရှောက်မှုယူကြပြီသည်အခြားမော်တာ options များလွတ်လပ်စွာထိရောက်မှုလူတန်းစား၏သင်တန်းရရှိနိုင်ပါသည် criteria.All ။ တစ်ဦးကပြည့်စုံဘရိတ်အယူအဆနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-optimized built-in ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနောက်ဆုံးမှာမော်တာအကွာအဝေးကိုဖြည့်။ ယင်းမော်တာသို့ပေါင်းစည်းကုန်ကျစရိတ်-optimized built-in ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ: ဘက်စုံဘရိတ်အယူအဆနှင့်ပေါင်းစပ်အကွာအဝေးအတွင်း featured မော်တာအရွယ်အစားနှုန်းသုံးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောဘရိတ်အရွယ်အစားအထိ ie ။ IE4.Compact ဒီဇိုင်းကိုမှထိရောက်မှုအတန်း IE1 များအတွက် Motors ကအာကာသနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကယ်တင်တော်မူ၏။ အနာဂတ်-အထောက်အထားလည်းအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (စံချိန်စံညွှန်းများ) နှင့်စပ်လျဉ်း။ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်လျှော့ချရေးစွမ်းအင်ထိရောက်မော်တာကိုအသုံးပြုပြီးသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ထိရောက်မော်တာထိရောက်မှုအတန်းမှညီ။
servo အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Servo ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်အကြောင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုလှိမ့တံခါးဝ servo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုပျော့နဲ့ Hard လှိမ့တံခါးဝသင့်လျော်သည်။ မြေတပြင်လုံးစနစ်, တစ်အသေးစားနှင့်အလင်းအထုပ်ထဲမှာတည်သည်ကမြင့်မားသော torque နှင့်မြင့်မားသော Operating အမြန်နှုန်း, နိမ့်သံ, မြင့်သောယုံကြည်စိတ်ချရချောမွေ့နှင့်ပျော့ပျောင်းတဲ့ operating ခါးဆစ်ရှိပါတယ်, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သောရမှာပေါ့။ အဆိုပါလှိမ့်ကာစရာကုလားကာဆွဲ switch ကို, တွန်းအားပေးခလုတ်, ဘလူးတုသ်, မြေပြင်ရေဒါ, မြေပြင်သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ operating မြန်နှုန်း: 1M / s ကို; operating အကျယ်: <16 ㎡; နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အချိန်:> 2000 အချိန်လည်းရှိ၏ rated ဗို့: 220v; rated Output: 0.75 KW / 1.5KW ။
အဆိုပါစနစ်အမှတဆင့် operated နိုင်ပါတယ်: 1) ကိုထိန်းချုပ်သေတ္တာ; 2) အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု inching; 3) စဉ်ဆက်မပြတ်အလိုအလျောက်လည်ပတ်; 4) အရေးပေါ်ရပ်တန့်; 5) တစ်ခုတည်းဘက်စစ်ဆင်ရေးသေတ္တာ; 6) အချိန်နှောင့်နှေး; 7) မြေပြင်ရေဒါနှင့် / သို့မဟုတ်သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာ။ နိစ္စထာဝရဆက်သွယ်မှုများအတွက် Wired Terminal နှင့်သွားရောက်ဖတ်ရှုပါ။
System ကိုသုံးအဆင့်ပါဝါကာကွယ်မှုများအတွက်ဖျူး / ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဝါယာကြိုးပိတ်ခလုတ်, လုပ်ငန်းလည်ပတ် circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အဖျူး / ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဝါယာကြိုးများနှင့်မော်တာကာကွယ်မှုများအတွက်အပူချိန် sensing relay ကိုရှိပါတယ်။
လေဖြတ် Controller အကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ဖိုးကိုအန်ကုဒ်အသုံးချ။ plug ကို receptacle သို့လေကြောင်း plug ကိုထည့်သွင်းထက်, အကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ဖိုးကိုအန်ကုဒ်နဲ့လျှော့ချ encoder`s ရိုးမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပါ, နှင့်လျှော့ချဖို့ပေါ်တွင်အတောင်ပံ fix ။
ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာများအတွက် mounting ဝက်အူဝက်အူချောင်လာပြီနဲ့ off ကျသွားခဲ့တာကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့မှန်မှန်စစ်ဆေးခြင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ Wired စစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်အပေါ် redactor များအတွက်ရေနံ Check, ပြောင်း။
Precision: အဆိုပါစနစ်အားအပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှစ်ချက်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာတာရှည်တဲ့ operating ဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း overshooting တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ငြိမ်မှု: အဆိုပါစနစ်အားပြည်တွင်းရေးဝါယာကြိုးရိုးရှင်းများနှင့်ဝါယာကြိုးများနှင့် terminal ကိုဆက်သွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆို function ကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းအယူအဆအသုံးချ။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း: မော်တော် max ကိုမြန်နှုန်း 2500 rpm ပါရှိ၏ တံခါးကို max ကိုလည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို2m / s ဖြစ်ပါတယ်။
ချောမွေ့: အဆိုပါ torque servo system ကိုအလိုအလျောက်ဝန်မှလိမ်အားချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, နှင့်၎င်း၏မြန်နှုန်းကွေး mode ကိုချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်လျော့နည်းမြန်နှုန်းစညျးမဉျြးဥပ step ။
SEJ မော်တာများနှင့် Holip controller ကိုအကြောင်း: သံလိုက်ဘရိတ်နှင့်အတူသုံးအဆင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုရှိပါတယ်, ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောစက်မှုအဓိက Drive နှင့်အရန် drive ကိုသင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်သောလျင်မြန်စွာရပ်တန့်မှန်ကန်သော positioning ကိုအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ 0.2 စက္ကန့်အတွင်းမှာဘရိတ်အချိန်။ လျှပ်စစ်မော်တာအခြေခံစီးရီး (Y ကိုစီးရီး) လျှပ်စစ်မော်တာစုတစုလျှပ်စစ် motor.The ကာကွယ်မှုလူတန်းစားအားဖြင့် DZM စီးရီးတိုက်ရိုက်လက်ရှိလျှပ်စစ်သံလိုက်ဖမ်းဆီး IP44, ဖမ်းဆီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း IP23.if မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သက်ဆိုင်ဖြစ်သည်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းဖမ်းဆီးတစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် IP44, ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်မိန့်နေစဉ်အထူးတောင်းဆိုချက်အရရှေ့ဆက်ထားရန်ရှိသည်သို့, ထို manufactory သီးသန့်တစ်ဦးကုန်ထုတ်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံပုံပုံတစ်ပုံကို 1 နှင့်2သည်ရုပ်ပုံ 1 လက် release.Picture2နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုတိုက်ရိုက်လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဉာဏ်ရည်မမီကွိုင်များ (6) အောင်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်, မူအရ BE operating လက်တော် release.Its မရှိဘဲဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှပ်စစ်သံလိုက်အင်အားရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏, လျှပ်စစ်သံလိုက် (7) (5) ပေးနေရတာကို bit နဲ့ဆွဲဆောင်နှင့်နွေဦး (24) ချုံ့, ((2) သွားပွတ်တိုက်မှုကတော့ပေးနေရတာကိုနည်းနည်းတော့၏မျက်နှာပြင် (5) နှင့်ဒိုင်းလွှားကို (26) မှဖမ်းဆီး disc ကိုအောင် လျှပ်စစ်မော်တာချက်ချင်းပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်) ဖြင့်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တောက်ပယ်ပြီးနောက်, လျှပ်စစ်သံလိုက် (7) လျှပ်စစ်သံလိုက်အားရှုံး, နွေဦး (24) ကိုပေးနေရတာကို bit နဲ့ဖြန့်ချိ (5) နှင့် disc ကို arrester မှတင်းကျပ်စွာချုံ့ (2), ဖမ်းဆီး function ကို, ရွှေ့ဖို့လှည့်လျှပ်စစ်မော်တာဆိုင်ဖြစ်စေလျက်, လျင်မြန်စွာ (ထိုမော်တာရိုးတံ) ကိုရပ်တန့်, ဒုတိယအကြိမ် power supply အထက်ဖော်ပြပါအရေးယူပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ချိတ်ဆက်ပါ။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး Servo မော်တော် variable-ကြိမ်နှုန်း Servo မော်တော် အလိုအလျောက်တံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို